Soomaaliya, 28 March 2018
Shaqaalihii Maamulka Hawada oo Muqdisho Gaaray
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 30 ka mid ah shaqaalihii maamulka hawada Soomaaliya oo horey saldhiggoodu u ahaa dalka Kenya.
Muqdisho: Weerar Qarax oo Dhaawacyo Sababay
Laba ruux ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay miino la sheegey in lagu xiray gaari noocyada yar yar ee sida gaarka ah ay dadku adeegsadaan, gudaha Muqdisho, maanta.
Bar. Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 414-aad
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha. Axmed Faarax Cali (Idaajaa) ayaa soo jeedinaya. Qeybtanna waa qeybtii 414-aad.
Soomaaliya iyo Kenya oo Dejinaya Xiisaddii Ka Dhalatay Derbiga
Saraakiil Kenyan iyo Soomaali ah, ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan dejinta xiisadda ka taagan xuduudda magaalada Beled-xaawo kadib markii dadka ku dhaqan Balad-xaawo ay sheegeen in derbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka ay ku soo durjisey dhinaca Soomaaliya.
Kaalmooy: Way Bateen Tahriibayaasha Libya Soo Aadaya
Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Libiya Muxiyidiin Maxamed Kaalmooy ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada dhalinyarada u tahriibay Libiya ee raba inay Soomaaliya ku noqdaan.